ပရဟိတတွေ လုပ်ကိုင် နိုင်အောင်မို့ ရုပ်ရှင် အစည်းရုံးကို စာမတင်ပဲ ကြောငြာတွေ ရိုက်တော့မယ်လို့ပြောလာတဲ့ ယုန်လေး – Let Pan Daily
ပရဟိတတွေ လုပ်ကိုင် နိုင်အောင်မို့ ရုပ်ရှင် အစည်းရုံးကို စာမတင်ပဲ ကြောငြာတွေ ရိုက်တော့မယ်လို့ပြောလာတဲ့ ယုန်လေး
အားလုံးကောင်းသော နေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ခင်များ . .အရင် လို Post ​တွေပြန်တင်ပါတော့မယ် 🤍 … အချိန်ကာလ တစ်ခုမှ စိတ်ညစ်စရာတွေများစွာကြုံခဲ့ပါတယ် .
အနားမှာရှိပေးတဲ့ မိသားစုလို သူငယ်ချင်းတွေ .. Ph နဲ့ရော Messenger မှာရော အားပေးတဲ့ တစ်ယောက်စီတိုင်းကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ် ကျွန်တော် တစ်နှစ် အပိတ်ခံရတယ်အပေါ်မှာ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး .
ဒါပေမယ့် စားဝတ်နေရေး နဲ့ ကျွန်တော် တာဝန်ယူထားတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ကျွန်တော် ပြန်ရုန်းကန်မှ ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် . ကျွန်တော်ရှင်သန်နေမှ ရပါမယ် .
We Love Yone Lay .. We Stand With You Yone Lay ဆိုပြီး အားပေးတဲ့ အယောက်စီတိုင်းကို လည်း ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်. ကိုယ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ပုံ တက်တူးထိုးထားတဲ့ လူတွေ အတွက်လည်း အစီစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ် .
We Love Yone Lay .. We Stan With You Yone Layဆိုပြီး အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ထားပြီး ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ လူတွေ နဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် ထောက်ပံ့ကြေး သူတို့တက်နိုင်သလောက် လစဉ်ပေးမယ် ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးပြောလာတော့ ပျော်ပြီးကြည်းနူးမိသလိုဝမ်းလည်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ် .ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ပဲ သူများကို ထောက်ပံ့ချင်တာ . ကူညီချင်တာ .
ကျွန်တော် မစွမ်းနိုင်တော့မှာကိုအရင်လို ပြန်မရပ်တည်နိုင် မှာကို အကြောက်ဆုံးပဲ .စရံ ယူစရာ ရိုက်စရာ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ပျက်ခဲ့ပါတယ် .အခု လုပ်လို့ရတဲ့ ဘောင်ထဲက အလုပ်လေးတွေကို အရင်ထက် ပိုကြိုးစားပြီး လုပ်ပါမယ် .Fb မှာ Post တင်ပြီး ကျွန်တော် ကြေညာပေးလို့ရပါတယ် . ရုပ်ရှင်အစည်းရုံးကို စော်ကားတာ မဟုတ်ပါဘူး ခင်များရုပ်ရှင်အစည်း ရုံးကို လျောက်လွှာတင်စရာမလိုပဲFb အတွက် ​ကြေညာလေးတွေ ရိုက်ပေးလို့ရပါတယ် .Ph နဲ့ ပဲ ရိုက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် .လူဦးရေး လည်း ရူတင်မှာ မများပါဘူး .ဒါလေးတွေ တော့ လုပ်လို့ရပါတယ် .
YONE LAY Page ​တွေနဲ့
YONE LAY Acc 🇲🇲အားလုံးပေါင်းရင်Follower3M လောက်ရှိပါတယ် .ဒါလေး နဲ့ ကျွန်တော် ပြန်ရပ် တည်မယ် .အရင်လို ပရဟိတ တွေ လိုအပ်တဲ့ လူတွေကို ကူဖို့မရရအောင် ပြန်ကြိုးစားမယ် .
အဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ကို ကြေညာလေးတွေအပ်ပါ အလုပ်လေးတွေ ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်.တက်စွမ်း သလောက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးပါမယ် .အားလုံး Peace 🇲🇲 ✌✌✌✌✌ 🇲🇲
source yone lay
ပရဟိတတှေ လုပျကိုငျ နိုငျအောငျမို့ ရုပျရှငျ အစညျးရုံးကို စာမတငျပဲ ကွောငွာတှေ ရိုကျတော့မယျလို့ပွောလာတဲ့ ယုနျလေး
အားလုံးကောငျးသော နလေ့ေး ဖွဈပါစေ ခငျမြား . .အရငျ လို Post ​တှပွေနျတငျပါတော့မယျ 🤍 … အခြိနျကာလ တဈခုမှ စိတျညဈစရာတှမြေားစှာကွုံခဲ့ပါတယျ .
အနားမှာရှိပေးတဲ့ မိသားစုလို သူငယျခငျြးတှေ .. Ph နဲ့ရော Messenger မှာရော အားပေးတဲ့ တဈယောကျစီတိုငျးကို အထူးကြေးဇူး တငျပါတယျ ကြှနျတျော တဈနှဈ အပိတျခံရတယျအပျေါမှာ ဘာမှ ပွောစရာမရှိပါဘူး .
ဒါပမေယျ့ စားဝတျနရေေး နဲ့ ကြှနျတျော တာဝနျယူထားတဲ့ လူတှအေတှကျတော့ ကြှနျတျော ပွနျရုနျးကနျမှ ရမှာဖွဈတဲ့ အတှကျ . ကြှနျတျောရှငျသနျနမှေ ရပါမယျ .
We Love Yone Lay .. We Stand With You Yone Lay ဆိုပွီး အားပေးတဲ့ အယောကျစီတိုငျးကို လညျး ကြေးဇူး အထူးတငျပါတယျ. ကိုယျပျေါမှာ ကြှနျတေျာ့ပုံ တကျတူးထိုးထားတဲ့ လူတှေ အတှကျလညျး အစီစဉျလေးတှေ ရှိပါတယျ .
We Love Yone Lay .. We Stan With You Yone Layဆိုပွီး အဖှဲ့တှေ ဖှဲ့ထားပွီး ကြှနျတျောတာဝနျယူထားတဲ့ လူတှေ နဲ့ ကြှနျတေျာ့ အတှကျ ထောကျပံ့ကွေး သူတို့တကျနိုငျသလောကျ လစဉျပေးမယျ ထောကျပံ့မယျဆိုပွီးပွောလာတော့ ပြျောပွီးကွညျးနူးမိသလိုဝမျးလညျး ဝမျးနညျးမိပါတယျ .ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောက ပဲ သူမြားကို ထောကျပံ့ခငျြတာ . ကူညီခငျြတာ .
ကြှနျတျော မစှမျးနိုငျတော့မှာကိုအရငျလို ပွနျမရပျတညျနိုငျ မှာကို အကွောကျဆုံးပဲ .စရံ ယူစရာ ရိုကျစရာ ရုပျရှငျကားတှေ ပကျြခဲ့ပါတယျ .အခု လုပျလို့ရတဲ့ ဘောငျထဲက အလုပျလေးတှကေို အရငျထကျ ပိုကွိုးစားပွီး လုပျပါမယျ .Fb မှာ Post တငျပွီး ကြှနျတျော ကွညောပေးလို့ရပါတယျ . ရုပျရှငျအစညျးရုံးကို စျောကားတာ မဟုတျပါဘူး ခငျမြားရုပျရှငျအစညျး ရုံးကို လြောကျလှာတငျစရာမလိုပဲFb အတှကျ ​ကွညောလေးတှေ ရိုကျပေးလို့ရပါတယျ .Ph နဲ့ ပဲ ရိုကျမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ .လူဦးရေး လညျး ရူတငျမှာ မမြားပါဘူး .ဒါလေးတှေ တော့ လုပျလို့ရပါတယျ .
YONE LAY Page ​တှနေဲ့
YONE LAY Acc 🇲🇲အားလုံးပေါငျးရငျFollower3M လောကျရှိပါတယျ .ဒါလေး နဲ့ ကြှနျတျော ပွနျရပျ တညျမယျ .အရငျလို ပရဟိတ တှေ လိုအပျတဲ့ လူတှကေို ကူဖို့မရရအောငျ ပွနျကွိုးစားမယျ .
အဲ့အတှကျ ကြှနျတေျာ့ ကို ကွညောလေးတှအေပျပါ အလုပျလေးတှေ ပေးဖို့တောငျးဆိုပါတယျ.တကျစှမျး သလောကျအကောငျးဆုံးကွိုးစားပေးပါမယျ .အားလုံး Peace 🇲🇲 ✌✌✌✌✌ 🇲🇲
ရငျနှဈမှာ ရဲ့ အတှငျးသားလေးတှေ ပျေါအောငျ မိမိုကျလှနျးနေ တဲ့ Xmue Xmue
အသည်း ယားစရာကောင်းလောက်တဲ့ အမူရာလေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုအောင် ဖမ်းစားထား တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
ဖြူဖွေးဝင်းဥတဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပြီး အလွင့်တလိုင်းပုံစံ နဲ့ အရမ်းလန်းနေတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး ရဲ့ဗီဒီယို
ရငျခုနျစရာ ကောငျးလှနျး တဲ့ အလှ တရားတှေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမျးစား လိုကျ ပွနျ တဲ့ ပကျထရဈရှာ